I-B2C CRM ibalulekile kuShishino oluJongene nabaThengi | Martech Zone
I-B2C CRM ibalulekile kuShishino oluJongene nabaThengi
NgoLwesibini, Agasti 25, 2015 NgoLwesibini, Agasti 25, 2015 UDavid Trice
Abathengi kwimarike yanamhlanje baxhotyiswe ngakumbi kunangaphambili, ngokukhangela amathuba okubandakanya amashishini kunye neempawu. Ukutshintshwa kwamandla amakhulu kubathengi kwenzeke ngokukhawuleza kwaye kushiye uninzi lweenkampani zingaxhotyiswanga kakubi ukuba zilisebenzise lonke ulwazi olutsha abathengi baqala ukubonelela ngeendlela ezintsha.
Nangona phantse onke amashishini ajongene nabathengi esebenzisa izisombululo zeCRM zokulawula abathengi kunye nethemba, uninzi lwazo lusekwe kubuchwephesha bamashumi eminyaka- kwaye ziyilelwe ikakhulu ukuphatha ukuthengisa kwe-B2B. Uninzi lweenkampani luxhomekeke kwiirekhodi zabathengi ezingafaniyo ngaphakathi kwePOS, eCommerce, okanye amaqonga entengiso angabelani ngedatha. Yakhelwe ukuxhasa imodeli yakudala ebinamanqanaba okuthenga ikakhulu asebenzayo, ezi zisombululo azikwazi ukubonelela ngemifanekiso epheleleyo yabathengi banamhlanje njengoko bengena kwaye bephuma kwintengiso yeentambo kaninzi, kumajelo ahlukeneyo kunye neendawo zokuchukumisa ezahlukeneyo ngaphambi kokuguqula.
Eyona nto iphambili kukuba iinkqubo ezisebenzayo kunye neeCRMs esekwe kwiindlela ezindala zokuziphatha azisebenzi kulawulo lwabathengi banamhlanje. Ubukrelekrele ababunikezelayo buvaleleke kwii-silos, zahlukile koko kufundwe ngamanye amajelo kunye nonxibelelwano; oku kuyithintela ekudibaniseni idatha yabathengi abatsha ngexesha lokwenyani ukupeyinta umfanekiso ochanekileyo wohambo olutsha lokuthenga, oluntsonkothileyo kwaye alunantsingiselo.
Yiyo le nto indiqhubileyo ukuba ndenze i-ENGAGE.cx, uhlobo olutsha ngokupheleleyo lweCRM olwakhiwe ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ukwenza ukuba amashishini azi kwaye akhe ubudlelwane kunye nabathengi bawo. Uzalelwe efini, eli qonga lifunda indlela yokuziphatha kwabathengi kwaye labelana ngedatha kuwo onke amajelo, nkqu nakwimithombo yeendaba zentlalo, ngenjongo yokuhambisa ubukrelekrele obuchanekileyo bamakhasimende apho kubaluleke kakhulu: ukubandakanyeka komntu ngamnye phakathi kwabasebenzi kunye nabathengi.
Ndiyibiza ngokuba yi-B2C CRM.
Kutheni i-B2C CRM?
Ku ENGAGE.cx, siyayazi loo nto I-80% yenzuzo yakho ihanjiswa ngama-20% abathengi bakho.
Khawufane ucinge ngokuhlakulela unxibelelwano olomeleleyo naba bathengi ngokuphatha ubudlelwane kakhulu njengobuhlobo bakho; ukwazana kunye nokuqonda ezona ndlela zilungileyo zonxibelelwano ngaphakathi kwemeko ezahlukeneyo apho unxibelelana khona:
Yonke incoko onayo nabahlobo bakho isekwe kwimbali ekwabelwana ngayo, kwaye ngokwendalo uyazi ukuba ungayijonga njani imeko yemeko xa unxibelelana.
Xa befowunela, bethumela imiyalezo, bethumela i-tweet, uyazi ukuba bangobani-amaxabiso abo, iminqweno yabo kunye neemfuno zabo.
Xa bekuthumela umxholo, uhlala uhambelana kuba bayazi ukuba ungubani.
Xa bevela endlwini yakho, uyazi indlela yokonwabisa, kwaye kusenokwenzeka ukuba banesiselo abasithandayo.
Ukufaka olu lwazi kwishishini lakho, ufuna ukuba iCRM yakho ibenakho ukungaxhasi kuphela olu hlobo lutsha lobudlelwane bamakhasimende kodwa ukunceda ukwakha amatsha. I-CRM yesiNtu ikhubazekile kuba ulwazi lwayo lilinganiselwe kuphela kwiimeko kunye nokudibana eyenzelwe ukuba ikwenze.
I-B2C CRM yakho entsha iyakuqonda ukuba utshintsha njani umthengi kuhambo lwakho lokuthenga kunye nobuhlobo bethu ne-Cloud® isebenzela ukwazisa nokuxhobisa abasebenzi ngolwazi olufanelekileyo lwabathengi, yakhelwe phezu kweqonga le-agile eliwela amajelo okubamba kunye nokulungisa idatha yokuziphatha.
I-B2C CRM Innovation: Ulwazi loTyelelo lwaBathengi
Ilifu lethu lobuhlobo linika ukuqonda, ukubonakala kunye nemeko apho abathengi bakho bakwihambo zabo ezithile. Oku kwenza ukuba amashishini afunde ezona ndlela zibalaseleyo zokubandakanya abathengi ngalo naliphi na ixesha kunye nendawo kubathengi - kuwo onke amajelo, imithombo yeendaba kunye neendawo. Ixesha elingaphezulu, sakha amaxesha okuhamba kobomi bomthengi ngamnye kuthi athi emva koko abonelele ngamanqanaba obukrelekrele anokusetyenziswa kubathengi ngabanye okanye kwangaphambili kubathengi babantu.
I-B2C CRM Innovation: Ukuxhotyiswa kwabasebenzi
Abasebenzi bakwimigca engaphambili yokuzibandakanya kwabathengi kwaye zezona zinto zibaluleke kakhulu ekwakheni ubudlelwane nasekuveliseni ukuthembeka. IiCRMs zemveli azinakho ukubanika amandla ngolwazi abaludingayo okwangoku ukulungiselela intsebenzo yomthengi ngamnye. Ilifu lobuDlelwane lenzelwe injongo ngokuthe ngqo ekunikezeleni umqeshwa oLUNGILEYO ngedatha yomthengi eFANELEKILEYO kuwo onke amanyathelo ohambo. Khawuqwalasele ingcaciso yengqondo kumthengi ngamnye ukuba abasebenzi banokuphakamisa ukukhokela unxibelelwano.
I-B2C CRM Innovation: Ubuchule beQonga
Ababoneleli beCRM bendabuko sele beqalisile ukubeka kwakhona iminikelo yabo malunga namava abathengi, kodwa zisakhiwa ngokubanzi kumqolo we-B20B CRM oneminyaka engama-2 okanye indibaniselwano yokufunyanwa okuninzi okuthungiweyo kunye. Akukho meko idala ukuba nesantya okanye ukuphendula okufunekayo ukujongana neemfuno zabathengi banamhlanje. Ilifu lobuDlelwane lenza ngokwezifiso ubukrelekrele ngexesha-lokwenyani kwaye luye lube nobukrelekrele kuyo yonke indawo yokubamba ngokuqhubekeka kunye nohlalutyo lwexesha lokwenyani lokuziphatha kwabathengi kunye neziganeko.
Zininzi izisombululo zeCRM phaya ezokufuna imarike ye-B2C, kodwa ngaphandle kokuba iqonga lenzelwe injongo yokuhambisa ubudlelwane kunye nabathengi kwisikali, ingazibiza ngokuba yi-B2C? Abathengi banamhlanje balambele ukuqondwa; bayarhalela, basabele kuko. Ngokufezekisa i-B2B CRM yokwenyani kuludwe lwetekhnoloji, iinkampani zinokuphuhlisa ubudlelwane obunomdla kunye notshintsho kunye nabathengi, kwaye yeyona nto iphambili kukhuphiswano lokwahlulahlula kunye necandelo lempumelelo ezinzileyo.
Unokufunda malunga nezinto eziphambili ze-B2C CRM kunye nendlela yokucebisa ngamava abathengi ngokujonga iphepha lethu elimhlophe, Kutheni uMthengi ejongene neShishini efuna iB2C CRM. Kuba siyazi ukubona kukukholwa, unokucwangcisa okwakho demo apha.
tags: b2cCRMulawulo oludibene nabathengiENGAGE.cx
UDavid Trice ungumseki kunye ne-CEO ye ENGAGE.cx, I-CRM ehamba phambili yamava kwishishini. Phambi kokumiliselwa kwe-ENGAGE.cx Trice yayiyi-VP yeCRM eOracle, apho ikhokele ukumiliselwa kwe-Oracle's Fusion CRM.